Muuri News Network » Xog Hada ah: RW CC oo 10-qodob kula hishiiyay P/L & Xasan sh,oo furka tuurtay.(Akhri Qodobada)
Xog Hada ah: RW CC oo 10-qodob kula hishiiyay P/L & Xasan sh,oo furka tuurtay.(Akhri Qodobada)
illo xog ogaal ah ayaa Muurinews.com kaga xog waramay wararkii ugu dambeeyay wadahadalka Puntland iyo Dowlada federaalka Soomaaliya waxaana la sheegayaa in ay ka dhex tafatay R/wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid iyo Xasan sheekh oo isku qabtay hishiis loo saxiixayo Puntlamd.
Heshiisku wuxuu ka kooban yahay 10 qodob oo qodobkiiba uu leeyaha a iyo b ama dhor fidqo oo kasii baxaysa oo gaaraya ilas 40 qodob oo yaryar.
Qodobada hishiiskaas oo aan wali la saxiixin waxaa ka mid ah:
1-War muurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Istanbul 23-24,2016, labada dhinac waxay ku heshiiyeen In la dhamaystiro go’aanna laga gaaro Caasimadda Soomaaliya iyo maqaamkeeda.
2-Caasimadda Soomaaliya waa iney yeelataa astaan qaran iyo mid siyaasad oo loo dhan yahay.
3-Sida uu qabo dastuurka Puntland (qod.4aad) iyo dastuurka DFS (Qod. 142aad), inta laga gudbayo nidaamka hab qaybsiga qabiilka ee 4.5, loona gudbayo nidaamka hal cod iyo hal qof. Waxaa lagu heshiiyey in Puntland ay hesho mudnaanta iyo madaxbanaanida ay ku geli karto heshiisyo caalami ah ee horumarineed isla markaasna ay ka faa’iidaysan karto khayraadkeeda dabiiciga ah (special arrangement).
4-Qodobada waxaa kaloo kamid ah in dib loogu noqdo gudiyadii Doorashada ee Dowlada Federaalku sameysay isla markaasna Puntland iyo Maamulada kale lagala tashado dhismohooda.
Qodobada kale ee Hishiiska ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
5-Labada dhinac waxay isku raaceen illaa iyo inta laga helayo hannaan dawladnimo Federaal ah oo dhamaystiran, Puntland inay toos u hesho saamiga saxda ah ee ay ku leedahay deeqaha caalamiga ah ee lagu helo magaca Soomaaliya.
Isla qodobkaas wuxuu qorayaa firqadiisa B. Sidaan.
Maadaama ay Puntland leedahay hawada duulimaad ee ugu dheer Soomaaliya, waxaa lagu heshiiyey in Puntland hesho xuquuqdeedii maamul iyo midda dhaqaale ee ay ku leedahay hawada Soomaaliya.
Qodobada waxaa kamid ah oo kale:
Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland waxay ku heshiiyeen in fadhiga Hay’adaha dastuuriga ah ee dawladda Federaalka Soomaaliya dalka loo kala qaybiyo si loo baahiyo awoodda iyo mas’uuliyadda dawladnimada, waxaana go’aan ka gaaraya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah.
Qodobka u dambeeya ee Gunaanadka heshiiska wuxuu u qoran yahay sidaan.
Mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha dastuurka waa sidan: Puntland waxay u aqoonsan tahay dastuurka DFS kii lagu wada saxiixay Nairobi 22 June 2012, kadibna lagu ansixiyey afti kooban Muqdisho 1dii Agoosto 2012.
Heshiiskan ay wada gaareen dawladda federaalka iyo puntland waxaa hirgelintiisa damaanad qaad buuxa ka noqonaya Urur goboleedka IGAD, Qaramada midoobay, Ururka midowga Yurub (EU) iyo Dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya.
Heshiiska lagu kala saxiixanayo Garowe waxaa kaloo kamid ah in Dhismaha aqalka sare ka hor mariyo intaan Baarlamaanka lasoo dhisin.
In Ergada dooraneysa halkii Xildhibaan ay noqdaan 50 ergo ama xubnood.
Heshiiska waxaa Saxiixi doona Madaxweyne Gaas iyo R/wasaare Cumar hasa ahaatee waxaa si aad ah kaga biyo diidan madaxweynaha Soomaaliya qodobada qaar u arka in ay yihiin ka bad badis.
Lasoco wixii soo kordha insha’allah